Bloggers Of Bloggers: ဘလော့ဂ်ဂါ တဲ့လား :)
အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် စာများရေးခြင်းကို ဘလော့ဂ်ဂင်းလုပ်သည်ဟု ခေါ်လျှင် ထိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင် စာရေးသားသောသူများကို ဘလောဂ်ဂါဟုခေါ်ပါသလား။ ကျန်ုပ်တို့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါလောကကြီးသည် အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကြားမှ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်အဟုန်ကောင်းစွာ ချီတက်လာနေပြီ။ နောင်တချိန်မြန်မာပြည်တွင် အင်တာနက်များမြန်ဆန်လာသောအခါ ၊ ဘလော့ဂ်ဂါကြီးကို လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးစွဲခွင့်ရလာသောအခါကြရင် မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါ လောကကြီးသည် ယခုအထက် ပို၍ပို၍ စည်ပင်လာမှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ ယခုထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးစရာ ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မလွဲပင်ဖြစ်သည်။ ကျန်ုပ်တို့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်လောကကြားတွင် ဘာသာပြန်ကိစ္စများ ၊ သက်မှတ်ချက်များကို ရဲရဲရင့်ရင့် သက်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးသည်မှာ စိတ်မရွှင်လန်းစရာကောင်းလှသည်။ အီးမေးအကောက်တစ်ခုရှိရုံ လောက်နှင့် ဘလော့ဂ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိုပိုင်ရှင်ကို ဘလော့ဂ်ဂါဟု ခေါ်ဆိုသည်မှာ အင်မတန်မှ ရယ်စရာကောင်းပြီး တခြားဖက်မှလည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်။
ကျန်ုပ်တို့သည် ၀ါသနာအရ စာများရေးချင်သောအခါ မိမိကိုယ်ပိုင် ဗလာစာအုပ်ပေါ်တွင် ရေးခြစ်ကြသည်။ မိမိရဲ့ အရေမရ အဖတ်မရများကို ဒိုင်ယာရီထဲတွင်ရေးမှတ်သောအခါ ထိုအခြင်းအရာကို စာရေးခြင်းဟုသက်မှတ်ကြသည်။ ထိုအရာကို ဖန်တီးသူသည် စာရေးသူဟု ခေါ်ဆိုသက်မှတ်ကြပြန်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် စာရေးဆရာများသည် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အရေးသားကောင်းတာ မကောင်းတာအပထား ၊ ထိုသူများသည်လည်း ကျန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ပင် စာအုပ်များပေါ်တွင် ရေးခြစ်ကြသည်။ ထိုသူများကို စာရေးဆရာဟု ခေါ်ဆိုသက်မှတ်သည်။ သူတို့လည်း စာရွက်ပေါ်တွင်စာရေးသည် ၊ ကျန်ုပ်တို့လည်း စာရွက်ပေါ်တွင်စာရေးသည်။ ဘာများကွာခြားကြသလဲ။ ကျန်ုပ်တို့သည်လည်း စာရေးသူ ၊ စာရေးဆရာများဟု မဖြစ်သင့်ကြပေးဘူးလား။
ကျန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ထိုအကြောင်းအရာကို အားလုံးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ၍ ဆရာကြီး (ခေတ္တကျွန်းပေါ်) နှင့် အမေးအဖြေ တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဘလော့ဂ်ဂင်းလုပ်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘလောဂ့်ဂင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ အကြမ်းအားဖြင့် ပြောရရင် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာရေးသားခြင်းကို ဆိုလိုတာပဲလေ။
အဲ့ဒါဆို ဘလော့ဂ်ဂါဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ?
ဘလော့ဂ်ဂါဆိုတာ အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ စာရေးတဲ့သူတွေကို ဘလော့ဂ်ဂါလို့ခေါ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘလော့ဂ်ဂါလို့ သတ်မှတ်ခံရတယ်။ (ဥပမာ ) မင်းလည်း ဒိုင်ယာရီရေးတယ်။ မင်းလည်း ဘောပင်နဲ့စာရွက်ကို အသုံးပြုတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဆရာ တဂိုး ၊ ဆရာ မြသန်းတင် သူတို့လည်းစာရွက်ပေါ်မှာ စာရေးတဲ့သူတွေ။ ဘာလို့ သူတို့ကြတော့ စာရေးဆရာအဖြစ်ခေါ်ကြပြီး မင်းကိုကြတော့ မခေါ်ကြလဲ။ ဒါဟာ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ မင်းက ရေးချင်တာတွေရေး ၊ အရေမရ အဖတ်မရတွေရေး တကယ်တော့မင်းလုပ်နေတာက ဘလော့ဂ်ဂါ တစ်ယောက်ရဲ့ စကားကိုသုံးရရင် မင်းက စိတ်အယားဖြေနေတာ။
ဟိုဆရာကြီးတွေက လူထုကို အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကိုဖန်တီးနေတာ။
အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘလော့ဂ်ဂါလို့ သတ်မှတ်ခံချင်ရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် ဘာများပေးဆောင်နေသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ရတယ် ။ မင်းဟာ နည်းပညာတွေကို ဖြန့်ဝေနေသလား။ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖြန့်ဝေနေတာလား ၊ မင်းဟာ အတွေးရစေမဲ့အရာများကို ရေးနေတာလား မင်းဟာ မင်းတက်ကျွမ်းတဲ့ ဘာသာတစ်ခုကို ချပြနေတာလား။အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ အရေးအသားတွေက အရေမရ အဖတ်မရ တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက် ဘာဆိုဘာမှမပေးတဲ့ အရေးအသားမျိုးကိုရေးပြီး ဘလော့ဂ်ဂါလို့ သတ်မှတ်ခံချင်ရင် မင်းဟာ အချောင်သမားပဲဖြစ်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘလော့ဂ်ဂါဆိုတာ သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ်မူတည်ပြီး သက်မှတ်ခြင်းခံရတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကဗျာရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ဘယ်လို မြင်လဲ?
ဒါက ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ကဗျာဆိုတာ လူပိန်းတွေနားမလည်ဘူး။ ပြီးတော့ ကဗျာရေးတာ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူး။ သူတို့က ကဗျာ ဘလော့ဂ်ဂါလို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။
အခုဆို တော်တော်များများကိုတွေ့နေရတယ်။ သတင်းဆိုဒ်တွေက သတင်းတွေကို ယူပြီး ဘလော့ဂ်တည်ဆောက်ထားတယ်။ သူတို့ကို သတင်းဘလော့ဂ်ဂါလို့ သတ်မှတ်လို့ရမလား?
အဲ့ဒါတွေကို ငါတို့က သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ သူတို့ကိုသူတို့ သတ်မှတ်ရတာ။ သူတို့ခံယူချက်က အဓိကပဲ။ အများပြည်သူ အလွယ်တကူဖတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာလို့ သတ်မှတ်ထားရင် ဒါဟာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ အခွင့်အရေးယူပြီး ငါလည်း ဘလော့ဂ်ဂါပဲလို့ ဟစ်ကျွေးမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူဟာ အခွင့်အရေးသမားပဲ။ ပြီးတော့ သူများ အုံးနှောက်ကို ဖောက်စားတဲ့ကောင်ပဲ။
ဟင်း.. ဦးနှောက်တောင်စာလုံးမှန်အောင်မပေါင်းတတ်ဘဲနဲ့များ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို မတန်ဘဲ မသုံးစမ်းပါနဲ့.. ကောမန့်တွေ မဖွင့်လည်းကိစ္စမရှိ.. ငါအကုန်လုံးprint screen ဖမ်းထားတယ်.... သူများကောမန့်မှထောက်ပြမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိသလိုတတ်သလိုနဲ့ ပြင်လို့လေ...
အဲသလို အဆင့်မှီ ဝေဖန်ရေးပိုစ့်ကို ကြိုဆိုတယ်။ နောက်ပိုစ့်တွေလည်း စောင့်ဖတ်နေမယ်။ ဆဲစာကလွဲလို့ မကောင်းရင် မကောင်းဘူး ပြောခွင့်တော့ပေး ဘော်ဒါတို့။ သူ့ဝေဖန်ကိုယ့်ဝေဖန်တော့ လက်ခံသင့်တယ်ထင်တယ်။
အင်တာနက် သုံးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေး တည်ဆောက်ထားကြတာ ကောင်းပါတယ်။ မကြိုက်တဲ့ သူ ၀င်မဖက်နဲ့လေ ဘယ်သူကမှ အတင်းမဖတ်ခိုင်းဘူးမဟုတ်လား။
အရေးအသား ညံ့ဖျင်းရင် သူ့အလိုလို သူ ချောင်ရောက်သွားမှာပဲလေ။
မြန်မာ ဘလော့တွေ များလာတာ ကောင်းပါတယ်။ ထင်မြင်ယူဆမှုတွေ အတွေးအခေါ်တွေ ဖလှယ်ခွင့်ရတာပေါ့ ။
စာဖတ်သူကို ပညာတွေ ပေးတဲ့ ဗဟုသုတ ဘလော့လေးတော့ လူတိုင်းလုပ်ချင်ကြမှာပဲလေ ။ ကျွန်မဆိုလဲ အတူတူပဲ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မသိတော့ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ ၀တ္ထုတွေ ကဗျာတွေ ရေးပီးတော့ပဲ တင်နေဖြစ်တယ်။
ဒီလို ၀ါသနာရှင်လေးတွေကို အားပေး ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘာပဲပြောပြော အင်တာနက် ပေါ်က ဘလော့တွေကို အစ်ကိုက ထမ်းထားရတာမှ မဟုတ်ပဲ လွှတ်ထားလိုက်ပါ။ အဖြေမှန်ကို လူတွေ ရှာတွေ့ကြမှာပါ။
စာလေးဘာလေး ပို့ချင်လို့ပါ။ ဘယ်ကိုပို့ရမယ်ဆိုတာ လမ်းညွန်ပါဥိး
ကျန်ုပ် ဆိုတာ မြန်မာ စကားအသစ်လား...